TReND ee barnaamijka iskaashiga khadka tooska ah ee Afrika - AfricArXiv
Kooxda ciyaarta XIGASHO Afrika waxay abuurtay shabakad khubaro ah oo ka caawin kara saynisyahanada Afrikaanka ah inay horumariyaan mashaariicdooda ay doonayaan iyagoo u maraya iskaashi khadka tooska ah, iyadoo la marayo gudbinta xaddidaadaha dhaqdhaqaaqa ee uu sababay cudurka hadda socda.
Caawinta la heli karo waxay u dhaxeysaa mashaariic yar-yar oo gaaban illaa tijaabooyin waaweyn oo balaariya bilo ama xitaa sannado waxayna u horseedi kartaa wadashaqeyn muddo dheer socotaa oo ka baxsan xaaladda caalamiga ah ee hadda jirta iyadoo booqashooyinka goobta lagu wadaago iyo is-dhaafsiga qofka.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahin kala soo bax Qaab-dhismeedka Iskaashiga Caalamiga ee Afrika ee 'TREND' (PDF).
Markaad ku soo biirto barnaamijkeenna cusub, mashruucaaga waxaa lala xiriirin doonaa khabiir diyaar u ah inuu kula bilaabo iskaashi cusub! Caawinaad dheeri ah hel oo hagaaji xiriirintaada saynisyahannada adduunka oo idil. Waqti lumin, ku biir hadda!https://t.co/PwK6uS0rjd pic.twitter.com/LQQl94Zqlp
- XIRIIRKA Afrika (@TReNDinAfrica) February 19, 2021
Waxaan ahay khabiir
Khubarada cilmiga sayniska waa la soo dhaweynayaa, laga bilaabo ardayda PhD ilaa macallimiinta, waxay dareemayaan inay doonayaan inay isbeddel sameeyaan oo ay ka caawiyaan kuwa kale inay fuliyaan himilooyinkooda cilmiyaysan.
Mar alla markii aan helno dalabkaaga, waxaad marin u heli doontaa kaydkeenna mashruuca si aad u hesho mashruuc ku habboon xirfadahaaga iyo waqtiga aad heli karto.
Isku qor khabiir
Waxaan hayaa mashruuc
Kooxaha ugu yaraan saddex qof oo qaba su’aalo yaryar iyo shaki, ama xitaa mashaariic waawayn oo u baahan taageero waarta waxay codsan karaan inay noqdaan lammaane Afrikaan ah barnaamijka iskaashiga khadka tooska ah.
Mar alla markii aan helno mashruucaaga, waxaa lagu dari doonaa keydkeenna mashruuca oo waxaa laga dhigi doonaa mid ay heli karaan khubarada oo dhami si ay u helaan cilmibaaraha ugu habboon ee kaa caawin kara mashruucaaga.
Ka baro wax walba oo ku saabsan barnaamijka wada shaqeynta ee 'TReND' barta trendinafrica.org/collaborations
Ku saabsan TREND ee Afrika
Taageerida Sayniska Afrika. At TReND, waxaan aaminsanahay qiimaha hal-abuurka sayniska ee horumarka dhaqaalaha iyo bulshada. Waxaan taageereynaa cilmi baarista cilmiga bayoolajiga ee Afrika iyadoo la siinayo cilmi baarayaasha Afrika qalab iyo khibrad ay ku hormariyaan himilooyinkooda cilmi baarista.
Asal ahaan waxaa laga aasaasay Jaamacadda Cambridge, waxaan nahay hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo ay maamusho shabakad ballaaran oo mutadawiciin saynisyahanno ah oo ka socda jaamacadaha adduunka ugu sarreeya. Waxaan ku faraxsanahay awoodsiinta sayniska iyo hal-abuurnimada. | trendinafrica.org